Soo bandhigida Samsung Galaxy S3 iyo processorkeeda Exynos 4 Quad ayaa imanaya. | Androidsis
Francisco Avila | | Samsung
Filashada iyo qadarka xanta maxaa dhalinaya bandhigga Samsung Galaxy S3 (SGS3 wixii ka dambeeya), layaabna ma leh, maadaama ay macnaheedu noqon doonto dhowr dhacdo, labadaba suuqa iyo shirkadda South Korea lafteeda. Warshadaha, maxaa yeelay SGS3-da cusub ayaa dejin doona "heerka" qalabka sare ee mobilada bilaha soo socda; iyo astaanta, maxaa yeelay naqshadeynta iyo qeexitaannada S3-kan waa la soo saari doonaa Walaashiis terminals, oo leh cabbirro shaashad kala duwan, iyada oo ujeedadu tahay in qiyaasta Galaxy-ga ay buuxiso baahiyaha isticmaale kasta.
Waxaan horay u aragnay dhamaan noocyada sawirada loo maleenayo ee SGS3, dhamaanba "been abuur" ama ikhyaar saafiya oo ah aqoonyahanada Photoshop, sidaa darteed laga bilaabo Androidsis ma dooneyno inaan wax ku biirino adoo shidaal ku daraya dabka, laakiin waxaan ixtiraameynaa bandhigga "Unpacked" ee Samsung waxay ka samayn doontaa wax soo saarka London soo socota May 3, halka aan ku hakan doonno inaan ka faalloono xogta kaliya ee ay xaqiijisay shirkadda Samsung:tetraprocessor«.
El wadnaha taas oo dhaqaajin doonta kala-goysyada bahalka, Exynos 4 Bawdada, waxaa loogu talagalay isbeddelka oo ay ku jiraan afar processor, oo ku socda wax aan ka yarayn 1,4 GHz. ARM kiliyaha A9, oo lagu rakibay Galaxy S2, halkii aad ka go'aansan lahayd naqshadeynta Kiliyaha-A15, ka casrisan oo horumarsan. Sidaa darteed, cutubyada ka shaqeynaya ayaa lagu darayaa, laakiin qaabdhismeedka ayaa sidiisa ahaan doona, ka dib istiraatiijiyadda nVIDIA iyo Tegra3 ee la xiriirta Tegra2.
Waxyaabo mudan in lagu amaano isagaa leh dhismaha 32 nm. (marka la barbar dhigo 40 nm. ee barxada Tegra), iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda Albaabka Birta Sare-K, taas oo kordhin doonta waxqabadkeeda iyadoo cunaysa 20% wax ka yar Exynos-kii hore ee lagu soo saaray 45 nm. Miyaynu ugu dambayntii awood u yeelan doonnaa inaan kordhinno nolosha waxtar leh ee culeys kasta oo ka mid ah batterigaMise keydintani waxay ku dambayn doontaa in lagu dheelitiro kororka isticmaalka qaybaha kale - muujinta-? Si loo nadiifiyo wixii shaki ah, waa inaan sugnaa falanqaynta koowaad. Waxa aan ku hubno waa inay noqon doonto wax lagu farxo in la tarmo Fiidiyowyada 1080p sida xariir oo kale oo arag Android wax ka fiican sidii hore.
Dhacdadii London unpacked taas oo Samsung ay ku soo bandhigi doonto calankeeda cusub waxay yeelan doontaa taageerayaal aad u tiro badan adduunka oo dhan, sidaa darteed waxay hubaal tahay inay si dhuumaaleysi ah u geli doonto meel caan ka ah wargeysyada qaranka, waxayna naga caawin doontaa inaan wax yar ka yaraano "geeky" adduunkan. Waana midda aan durba maqlayno guuxa bahalka ku dul socda afar lugaha muruqyada at 1,4 GHz. jidka loo maro gacmaheena ... Qaniinyada ugu horreysa, Maajo 3.
Waxaan ku cusbooneysiiyaa sawiradii ugu dambeeyay iyo macluumaadka ay faafisay «SamMobile«, Taas oo ah ilo lagu kalsoonaan karo:
SGS3 waxay keeneysaa nooca Android 4.0.4 sida caadiga ah
Moodelku wuxuu yeelan doonaa magaca farsamada ee GT-I9300
Waxay ka khafiifi doontaa SGS2 (waa la filayaa).
Kaamiradu waxay yeelan doontaa wax aan ka yarayn 12 MP.
Waxay umuuqataa inay yeelanayso leedhka ogeysiisyada.
Samsung waxaa sidoo kale la filayaa inay ku soo bandhigto boosteejooyin kale isla goobtaas (GT-I9800?)
Macluumaad dheeraad ah - Samsung Galaxy SIII, oo ay ku xeeran yihiin warar xan ah, 3-da Maajo, Samsung Galaxy S3 ayaa la soo bandhigi karaa, ARM Cortex-A9, ARM Cortex-A15
Sources - Samsung.com, Samsung.com, YouTube, SamMobile.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S3: bahalka dabagalaya afar
Sawirada waxaa ka muuqda kamarad 8 megpixel ah oo aan lahayn 12 taas oo aan rajeynayo inay qalad tahay nooca ugu dambeeyaana wuxuu la soo baxayaa 12 megapixel
Ku jawaab Alejandroc
Batariga wuxuu ku dhamaan doonaa 2 nanoseconds
Aaway biyahaygii? ciyaar xujo leh shaabadda Disney
Baro inaad ku sawirato mobilkaaga Sawir Wax